Sarudzo dzakasiyana dzeServers | ECommerce nhau
Sarudzo dzakasiyana dzeseva
Para chengetedza webhusaiti yedu kumhanya tinosangana zvakanyanya zvitatu zvingasarudzwa pakusarudza sevha: Yako, yakabhadharwa uye yemahara. Isu tinopa zvakanakira nekuipira chimwe nechimwe chazvo kuti ugone kusarudza sarudzo inokodzera zvaunoda.
1 Yega Server:
2 Bhadhara Server:
3 Mahara Server:
Iyo ndiyo irimo iwe unoisa zvivakwa iwe pachako mukugadzwa kwako uye maneja software uye chengetedzo protocols
Kubatsirwa: Iwe unodzora zvakakwana pane zvese zvinhu zvewebsite yako. Kubva pakuonekwa kune chinzvimbo icho peji rako richava nekutambira vashanyi. Mune ino pfungwa, iwe unogona kuyera sezvo izvo zvinodikanwa zvepeji rako zvinoshanduka. Nekusavimba neimwe sevha yekunze, hauna kukanganiswa kana paine kurwisa kukuru kana kana paine kusashanda.
Kukanganisa: Iyo mari inogona kuve zvakaoma kubhadhara kutanga sezvo inogadzira akateedzana emitengo isina kunangana. Sezvo iwe uchingova wega mutoro wekuita mushe kwemapeji ako, unofanirwa kunge uine timu inopa rubatsiro uye kugadzirisa kune iyo software uye Hardware. Sezvo bhizinesi rako parinokura, iwe unofanirwa kuisa mari mune zvirinani michina kuti udzivise kupwanya system kana kusashanda zvakanaka.
Iyo ndiyo irimo tinobhadhara basa mune iro rekunze server rinorendwa kwatiri uko ruzivo rwewebsite yedu ruchawanikwa.
Kubatsira: Ndicho mari sarudzo Uye isu hatifanire kunetseka nezve Hardware kana kuisirwa software. Ivo vanowanzo kuperekedzwa nekuchengetedza uye kushambadzira maprotocol.
payakaipira: Pane parinogumira maererano nehuwandu hweruzivo rwatinogona kubata uye tinogona kukanganiswa kana paine kurwisa pane server yedu.
Izvo zvakafanana neiyo yakabhadharwa, asi nemusiyano wekuti izvo zvinogumira maererano nemaitiro zvakawandisa.
Kubatsira: Hatifanirwe kuisa mari uye zvakanaka kana isu tiri kutanga kana kana iri ratidziro yekuti peji redu rekupedzisira richava.
payakaipira: Chaizvoizvo iyo URL yatichave iine zita rekunze server uye pachave neyechitatu-bato kushambadzira pane peji redu. Kuwedzera pakuve nemuganhu weruzivo rwekubata uye mashoma maitiro ekugadzirisa.
Bhizinesi rega rega repamhepo rine zvido zvakasiyana uye zvakakosha kuti uzive kuti ndedzipi sarudzo dziripo mumusika kusarudza iyo inotikodzera zvakanyanya. Izvo zvakakoshawo kuti tiongorore zvinangwa zvedu zvenguva refu kana tichisarudza sevha kudzivirira zviyero zvinogona kukanganisa ramangwana rekutengesa kwedu online.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Sarudzo dzakasiyana dzeseva
Chitoro changu chinoda app here?
Kubatsira kweS SSL Certification kune webhusaiti